Casharrada iyo Tilmaamaha loogu talagalay iPhone | Wararka IPhone
Casharrada iyo buugaagta
Actualidad iPhone waxaan kaa caawin doonaa inaad sida ugu badan uga faa'iideysato taleefankaaga Apple xitaa haddii aad ku cusub tahay mowduuca oo aadan aqoon meesha aad ka bilaabeysid. Markii lagaa qaado waxaad haysan doontaa wax dhan ururinta buugaagta iyo casharrada taasi ayaa ku bari doonta, talaabo talaabo ah iyo sawirro, waxa ay tahay inaad sameyso iyadoo aan loo eegin haddii aan ka hadalno Jailbreak, macruufka ama arrin kale. Xaaladaha qaarkood sidoo kale waxaad heli doontaa casharro fiidiyoow ah aad u dhameystiran si aadan u waayin faahfaahinta waxa la sameeyo.
Sida loo isticmaalo Reactions on WhatsApp
by louis padilla samee 1 toddobaad .
WhatsApp ayaa horey u daah-furtay howlaheeda cusub oo kuu sahlaya inaad ka falceliso fariimaha laguu soo diro adigoon wax qorin…
Sida loo hubiyo batteriga AirTag kaaga
by Miguel Hernández samee Toddobaadyada 2 .
Wax yar in ka badan hal sano ayaa ka soo wareegtay markii si rasmi ah loo bilaabay AirTag iyo isticmaalayaasha qaar ayaa durba bilaabay inay su'aalaan...
Waa maxay sababta emoticons-ku uga soo muuqan waayaan iPhone-kayga?
by Qolka Ignatius samee Toddobaadyada 3 .
In this article waxaan ku tusi doonaa sababaha sababta emoticons ma ka muuqan on iPhone. Dareen-celintu waa...
Sida loo cusboonaysiiyo batterigaaga MagSafe si uu dhaqso ugu dallaco iPhone kaaga
Apple ayaa soo saartay casriyeyn ku saabsan baytarigeeda MagSafe iyada oo ay cusub tahay in hadda awoodda dallacadu ay tahay ...
Sida loo maareeyo calaamada goobta ka muuqata iPhone kaaga
by Alex vincent samee Toddobaadyada 4 .
Hubaal inaad aragtay in calaamada goobta ay ka soo muuqato wakhti ka waqti xagga sare ee iPhone kaaga,…
by Qolka Ignatius samee Toddobaadyada 4 .
Sida loo beddelo icon app on iPhone
by Qolka Ignatius samee 1 bishii .
Beddelidda astaanta apps-ka iPhone-ka waxay noo ogolaanaysaa inaan taabasho shakhsiyaynta siino iPhone-kayaga taas oo,...
Sida loo damiyo ogeysiisyada iPhone
Maqaalkan waxaan ku tusi doonaa sida loo damiyo ogeysiisyada iPhone, iPad iyo iPod touch. Ogeysiisyada…
Waa maxay AirDrop iyo sida looga faa'iidaysto
Haddii aad hadda soo saartay iPhone ama iPad cusub, waxay u badan tahay inaad la yaabtay waxa AirDrop yahay. Sidoo kale waa…
Sida loo qaabeeyo iPhone kaaga
IPhone kaaga, in kasta oo uu si ula kac ah u yahay shey leh software iyo hardware si wadajir ah u socda...
TOP 10 ee Apple Watch hawlaha nolol maalmeedka
by louis padilla samee Bilaha 2 .
Astaamaha ugu horumarsan ee Apple Watch waa kuwo aad loo yaqaan inta badan, laakiin waxaa jira waxyaabo kale oo badan oo aan awoodno…
Sida loo wareejiyo sawiro ka iPhone in computer
Sida loo ogaado meesha ugu dambeysa ee iPhone-kaaga, xitaa haddii ay ka dhammaato batteriga
Sidee loo soo celiyaa astaamaha iPhone?
Sida loo beddelo ama loo joojiyo PIN kaarka SIM-ka ee iOS 12
Sida loo hubiyo xaalada batterigaaga talaabooyinkan fudud
Sida Loogu Wareejiyo ringtones-ka iPhone ka iTunes 12.7